Fryer Saliida bilaashka ah ee VPCOK | Falanqaynta, Ra'yiga iyo Qiimaha ugu Wanaagsan 2022
La cusbooneysiiyay 05/2022
Iyada oo leh qaboojiyaha hawada kulul vpcok waxaad bilaabi kartaa inaad hagaajiso cuntadaada, maadaama lagu shiilo saliid aad u yar ayaa kuu ogolaanaysa meesha ka saara dufanka badan ee cuntada ku jira.
Farsamadeeda waxay cuntada ka diirisaa jiho kasta, iyada oo si isku mid ah u karinaysa iyo caafimaad ahaan adiga iyo qoyskaagabaSaliid yar waxay ka dhigan tahay caafimaad badan.
Waxaa laga yaabaa inay ku xiisayso: Fryers Saliid La'aanta Ugu Fiican
Falanqaynta astaantan waxaad ka heli kartaa dhammaan macluumaadka aad u baahan tahay si aad u ogaato haddii ay buuxinayso baahiyahaaga: dib u eegista isticmaalaha, qeexitaannada, faa'iidooyinka iyo khasaaraha, iwm ..., taas oo kuu ogolaanaysa inaad samayso go'aanka wax iibsiga ee ugu fiican.
➤Vpcok Astaamaha Sifada
Vpcok ma yahay sumad shiilay oo aan saliid lahayn?
➤ Saliida Vpcok Qiimaha Fryer Free
➤ Iibso Vpcok Air Fryer
Aynu aragno waxa ugu yaabka badan ee shiilanahaaga ugu dhaqaalaha badan.
▷ 3,6 litir
Shiilan aan saliid lahayn ayaa leh awood 3.6 litir ah, sidaas darteed waa at the qaybta dhexe. Iyada oo cabbirkan ayaa lagula talinayaa qiyaastii 3 qaadasho qiyaastii, inkastoo ay ku xiran tahay saxanka iyo sida aan u hamuun qabno.
▷ 1300 Watts oo Awood ah
Ma aha awood hoose, in kasta oo ay run tahay in saamiga awoodda / awoodda uusan ka mid ahayn kuwa ugu fiican. Tani waxay kuu ogolaanaysaa firfircoonida tamarta sii A +++, taas oo macnaheedu yahay isticmaalka tamarta hoose.
Awooddani waxay kuu ogolaanaysaa inaad gaadho a heerkulka ilaa 200 darajo waxaanan ku hagaajin karnaa baahida cunto karinta kasta ugu yaraan 80ºC. Hayso a xakamaynta heer kulka ee guddigeeda dhijitaalka ah oo u dhexeeya 80º ilaa 200º.
Maskaxda ku hay in aysan noqon doonin heerkul isku mid ah si aad u doorato fryer aasaasiga ah sida qaboojiyaha hawada, markaad karineyso suxuunta caadiga ah. Hawadu si xoog leh ayey u wareegtaa ama si joogto ah u wareegtaa, markaa heerkulku wuxuu u baahan yahay in waxoogaa hoos loo dhigo Fryers Vpcok. Sida ugu habboon waa in la sii kululeeyo ka dibna lagu hagaajiyo heerkulka waxa aan ku karsaneyno.
▷ nadiifinta dhib la'aan
Waxa aan had iyo jeer eegno marka aan iibsaneyno qalabka waa in ay fududahay in la nadiifiyo. Sidaa darteed, marka laga hadlayo Fryers hawada Vpcok waa, sababtoo ah waxaad ka saari kartaa qalabkooda oo aad si raaxo leh u dhaqi kartaa. Sida aan soo sheegnay dahaadhkeeda, waxay la macno tahay in lagu tirtiro maro qoyan ama warqad jikada, waxaan mar hore samayn doonnaa nadiifinta gudaha. Si la mid ah sida aan sidoo kale u sameyn karno qaybteeda dibadda ah, maadaama kaliya maro jilicsan ay ku filan tahay inay had iyo jeer iftiimiso. Haddii aad ku degdegto, waxaad had iyo jeer ku dhaqi kartaa qaybahaaga makiinada weelka.
Labada qaybood ee ugu muhiimsan ee ay tahay inaad nadiifiso ka dib markaad isticmaasho ayaa aad u fudud in la saaro oo aad dhaqdo labadaba gacanta iyo makiinada weelka lagu dhaqo.
Banaanka waxaa lagu nadiifin karaa maro qoyan oo nus-qoyan ah runtiina ma jiraan wax badan oo la sameeyo Dhab ahaantii ma jiraan wax wasakh ah marka la karinayo.
▷ Xakamaynta Dijital ah oo leh Shaashad LCD ah
Guddiga dhijitaalka ah ayaa ogolaanaya hagaajin waqtiga karinta iyo heerkulka oo ka daawo shaashadda si aad u habayso cuntooyinka, waxaa intaa dheer guddigeeda fudud ee super fudud waxaa ku jira liiska 6 fursadaha cunto karinta caadiga ah.
Waad ku mahadsan tahay saacada, waxaad diyaarin kartaa wakhtiga karinta oo ka bax shiilan. Tani waxay ka dhigaysaa mid kale oo ka mid ah sifooyinka wanaagsan, marka aynaan haysan wakhti aan ku joogno jikada. Caadiyan waxay leedahay shaqo xidhitaan ka dib, si looga ilaaliyo in cuntadu dhaafto ama ku dhegganaato.
Mar la bilaabay si toos ah ayuu u dami doonaa marka la dhammeeyo wakhtiga la doortay iyo waxa kale oo ku jira ilaalinta xidhidh toos ah marka la saarayo dambiisha.
Ilaalinta jikada waa shay ay tahay in aan ku xisaabtano oo aan u baahanahay mar walba. Sidaa darteed, marka ay jirto calaamad u maleyneysa sida Vpcok, waan jecelnahay mana diidi karno. Waxa ay shiiladeeda ku dhex leedahay dabool heerkul fiican leh, kana ilaalinaysa kulaylka iyo in aan gubi karno haddaan taabno. Daboolkaan wuxuu ka samaysan yahay PVC tayo sare leh. Muuqaal laga yaabo inaan la dareemin laakiin runtii muhiim ah.
Mabaadi'da hal-abuurka iyo tayada ayaa ah wax kasta oo loogu talagalay astaantan, taasina waa sababta ay alaabteeda u leedahay naqshado aad u fiican.
Qalabkan shirkaddu waxay dooratay a nidaamka leh khaanadaha la saari karo cuntada leh naqshadeynta khadadka nadiifka ah iyo muuqaalka casriga ah ee madow oo leh lahjado lacag ah
Naqshadeeda quruxda badan sidoo kale waa mid kale oo ka mid ah faa'iidooyinka waaweyn ee shiilan Vpcok. Waxay leedahay cabbir wanaagsan oo ka kooban silhouette cadaalad ah oo qurux badan. Dhammaadkaas ugu yar ee dhalaalaya waa waxa aan uga baahanahay jikada. Laakiin kuma faraxsana, inkastoo dhammaan sifooyinka weyn ee ay ka mid tahay, waa in la sheegaa waxay leedahay cabbir yar si loogu kaydiyo meel kasta oo ka mid ah jikada.
Ka samaysan caag iyo jir bir ah, qolof la sameeyay oo tayo sare leh lakabka labajibbaaran iyo taabasho qabow si ay ugu adkeysato heerkulka sare kana fogaato gubashada.
Kala xisaabtan dahaarka aan dhegta lahayn Qaybaheeda laga saari karo oo aan lahayn walxo sun ah BPA o bisphenol A. Laakiin waxaa dheer, waxay ka hortagi doontaa qashinka ka samaysan dambiisha. Tani waxay u tarjumaysaa suxuunta dhadhanka fiican, oo leh natiijo wanaagsan iyo sidoo kale, Waxay nagu badbaadin doontaa waqti marka ay timaado nadaafadda. Dahaar inagu dheeraan doona oo adkaysi u yeelan doona xagashada.
Cabirrada: Dhererka 32 x ballac 26 x qoto dheer 33 cms
Miisaanka Qiyaasta: 4,5 Kiilo
▷ BPA bilaash ah
Mar kasta oo aan soo iibsanno badeecad, waa inaan hubinno inay BPA bilaash tahay. The bisphenol-A waa iskudhis kiimiko ah. Taas oo macnaheedu yahay in ay aad khatar u leedahay caafimaadka. Sidaa darteed, Fryers Vpcok waxaanu hubinaynaa in qayb ka mid ah qaybaha ay ka kooban tahay aysan ku darin, sidaas awgeed, waan dejineynaa ama deganahay, annaga oo og in mid kasta oo ka mid ah qaybihiisa uu xor ka yahay dhammaan noocyada isku dhafka noocaan ah. Alaabooyinka tayada leh sida birta aan la taaban karin ayaa ah kuwa runtii xiddig ku leh qalabkan oo kale.
▷ Cunto karis caafimaad leh
Sida aad horeba u ogeyd, shiilan-la'aanta saliiddu waxay wax ku karsan karaan hab ka caafimaad badan marka loo eego shiilan dhaqameed. Tani waa sababta oo ah waxaad ku dari kartaa hal qaado oo kaliya waxayna ku filnaan doontaa inaad diyaariso noocyo kala duwan oo suxuun ah oo aan lahayn dufan. Dadku sidaas bay yiraahdeen waxay hoos u dhigtaa dufanka cuntada in ka badan 80%, si loo faahfaahiyo qaabkan aan soo sheegnay. Markaa waanu daryeeli karnaa nafteena iyo qoyskayaga oo dhan, laakiin annagoo aan ka tanaasulin suxuunta aan aad u jecelnahay.
▷ Barnaamijyada karinta
Fryers Vpcok waxay leeyihiin 6 barnaamij oo cunto karin ah oo horay loo habeeyey. Markaa si aan awood ugu yeelanno isticmaalkooda, waa in aan riixno badhan oo aan sugno waqtigooda karinta, iyada oo aan dhibaato weyni jirin. Waad ku mahadsan tahay barnaamijyada, ma sii wadi doonno inaan dooranno wax kale, ama heerkulka ama hagaajinta wakhtiga karinta, sababtoo ah dhowr daqiiqo gudahood waxaan haysan doonaa saxan qumman oo la yaab leh martida. Sow fikrad fiican maaha?
Marka lagu daro laba sano damaanad ka dhanka ah cilladaha wax soo saarka, calaamaddu waxay bixisaa 30 maalmood in lagu soo celiyo alaabta Haddii ay ku qanci waydo waxaad filaysay.
Inkasta oo calaamaddu aysan hubaal ahayn mid ka mid ah kuwa ugu caansan ee loo yaqaan qaar badan iyo kuwo badan oo idinka mid ah, waxay horeyba u samaynaysaa niche wanaagsan suuqa. Sababtoo ah Fryers Vpcok waa la qabsaday qof kasta. Runtu waxay tahay waa qalab qiimo la yaab leh u leh lacag.
Sidaa darteed, in yar oo yar, waxaa loo arkaa inay horeba ula tartantay noocyo kale oo ka badan had iyo jeer ama nolosha oo dhan, sida aan caadi ahaan u magacowno. Mid kasta oo ka mid ah wax soo saarkeeda ayaa nooga wanaajiya kala-duwanaanshaha iyo hagaajinta maalinteena maalinba maalinta ka dambeysa.
Dabcan, haddii dhammaan wixii la sheegay ka dib, waxaan diiradda saareynaa su'aasha ah in Vpcok uu yahay calaamad wanaagsan oo saliid ah oo aan saliid lahayn, waxaan dhihi doonaa haa. Taas marka lagu daro tayada, qiimihiisu runtii waa la hagaajiyay. Taasi waxay noo ogolaanaysaa inaan ku raaxaysanno cuntooyin badan, si aad u dareen leh iyo marka lagu daro, in ay leedahay cabbir isku dhafan wax kasta oo ay na siiso, sababtoo ah waxay leedahay awood yar oo ka sarreysa moodooyinka kale. Haddaba maxaan ku weydiin karnaa?
Kala duwanaanshaha qiimaha moodelkan ku dhawaad ​​90 Euro, celcelis ahaan qiimaha la mid ah alaabta kale iyo si waafaqsan tilmaamaha ay bixiso.
Haddii ay dantaadu tahay waad awoodaa halkan geli oo arag qiimaha saxda ah waxaad haysataa hadda.
6 barnaamij oo horay loo diyaariyey iyo wakhtiga iyo heerkulka ayaa sidoo kale lagu dejin karaa adiga keligaa si aad u fududaato. Fadlan ogow in wakhtiga iyo heerkulka hore loo qorsheeyay ay yihiin tixraac. Waxay kuxirantahay xajmiga maaddooyinka
Cabbir yar laakiin awood weyn. Fryer-kani waxa uu dabooli karaa baahiyaha qoysaska
qolof u adkaysta heerkul sare oo tayo sare leh waxay ka hortagtaa gubashada; Digsiga dahaarka leh ee aan duubnayn waa badbaado, ma aha sun waana fududahay in la nadiifiyo
Shiileeyaha iyo dambiisha waxaa loo kala sooci karaa si sahlan oo cunto loo helo; Naqshadaynta hoose ee godan waxay si wax ku ool ah uga saari kartaa baruurta xad dhaafka ah
Qabashada dambiilaha ka-hortagga dabka, dahaarka heerkulka sare, ilaalinta tooska ah ee korontada ka dib qaadashada dambiisha, badbaado leh oo la isku halayn karo
Haddi tan qaboojiyaha caafimaadka qaba ku qanci waayo filashadaada waxa laga yaabaa inaad xiisaynayso model top ka shirkad la mid ah.
Waa qalab leh awood badan iyo fursado cunto karinta oo badan kaas oo sidoo kale ka helaya qiimeyn weyn kuwa tijaabiyay.
Fryer bilaa Saliid,...
10 barnaamij oo horay loo diyaariyey iyo wakhtiga iyo heerkulka ayaa sidoo kale lagu dejin karaa adiga keligaa si aad u fududaato. Fadlan ogow in wakhtiga iyo heerkulka hore loo qorsheeyay ay yihiin tixraac. Waxay kuxirantahay xajmiga maaddooyinka
Awood weyn, oo lagu qalabeeyay suxuunta iyo cuntooyinka kala duwan. Shiiliyahani wuxuu dabooli karaa baahida qoyska
Is barbar dhig faraqa u dhexeeya labada qalab si deg deg ah
Cuntooyinka hore loo diyaariyey
In kasta oo aysan ku qornayn Isbaanishka, fiidiyowga waad awoodaa si cad u arag hawlgal fudud iyo natiijada qalabkan.
Iyadoo in ka badan 150 macaamiishu ay ku qiimeeyeen Amazon (in ka badan 90% togan) iyo a dhibcaha 4,5 ka mid ah 5 Waxay ka mid tahay kuwa ugu qiimaha badan.
Faallooyinku waxay diiradda saaraan fududaynta isticmaalka, waxtarkeeda, sida qani iyo caafimaad ee cuntada la diyaariyey iyo sida ay u fududahay in la nadiifiyo ka dib.
Tani waa qayb muhiim ah marka la samaynayo go'aanka iibka, maadaama dadka kale ee isku dayay shiilan ay muujiyaan khibradooda alaabta oo u adeegaan tixraac ahaan.
Waxaad awoodi kartaa Riix halkan si aad u aragto dhammaan fikradaha ee iibsadayaasha.
Tilmaamaha ay bixiso iyo sidoo kale qiimeynta wanaagsan oo ay weheliso qiimo ka badan oo sax ah Waxay u dhigaan sidii doorasho wanaagsan kuwa raadinaya qaabka dhijitaalka ah iyo nidaamka khaanadaha oo leh awoodda ugu badan ee saddex qof.
Inkasta oo aan haysano dammaanadda ugu yar ee sharciga ah, waxa aan jecelnahay ugu yar ayaa ah in noocyada noocaan ah aysan haysan adeegga farsamada ee waddankeena.
Xakamaynta dhijitaalka ah oo leh bandhig iyo 6 barnaamij
Muddada soo celinta
Astaan ​​Aan La Aqoon
Doodaha ay soo bandhigtay astaantani ma ku qanciyeen? Waxaad ka heli kartaa kaaga badhanka:
2. Faahfaahinta tayada sare leh: tayada sare ee tayada sare leh ee heerkulka u adkeysiga hawo-mareenka hawada si looga hortago gubashada; dahaarka aan dhejiska lahayn, ammaan ah oo aan sun ahayn; Gacanka dambiisha ka-hortagga dabka, heerkul sare oo dahaaran, ilaalin otomaatig ah oo korontada ka dib qaadashada dambiisha, badbaado leh oo la isku halayn karo
3. Naqshad maskaxeed: wakhtiga u dhigma waxaa loo dejin karaa iyadoo loo eegayo maaddooyinka kala duwan, hawlgalkuna waa mid fudud. Shaashadda taabashada waxa ku jira todoba hab oo fudud oo degdeg ah, kuwaas oo si degdeg ah loo gaadhi karo daqiiqad gudaheed, wax-soo-saarka cunnadana si degdeg ah oo fudud ayaa loo dhammaystiraa.
4. Si fudud loo nadiifin karo: Fryer-hawo leh cabbir yar iyo awood weyn si uu u daboolo baahiyaha qoyska. Dheriga iyo dambiisha waa kala duwan yihiin waxaana loogu talagalay in si fudud loo kala furfuro iyo walxaha aan dhegta lahayn. Si fudud u masax nadiif ah, habboon, nadaafad
5. Taageerada xirfadeed: Haddii aad wax su'aalo ah ka qabto shiilan, fadlan xor u noqo inaad nala soo xidhiidho. Fadlan si taxadir leh u hubi buug-gacmeedka isticmaalaha ka hor inta aanad isticmaalin
(Codadka: 8 Celcelis: 4.9)
⭐ Fryer Saliid la'aan ah » ⭐ Vpcok
3 faallooyin ku saabsan "Vpcok Fryer oo aan saliid lahayn"
26 / 10 / 2020 at 17: 11
Gacanku waxa uu leeyahay qayb bir ah oo daxalaysa ka dib markii la isticmaalo waqti yar. Dhibaato dhab ah sababtoo ah si gooni gooni ah kuuguuma soo diri qaybo dabacsan mana jirto adeeg farsamo oo Spain ah sidoo kale.
16 / 03 / 2021 at 10: 48
Runtu waxa ay tahay in aanu garanayn qaybta gacanta aad ula jeedo. Kayagu waxa uu ka samaysan yahay baco.
07 / 02 / 2022 at 23: 15
Haddii teedu ay haysato gacanta aluminium oo ay noqoto mid daxalaysa oo cuntadu ay bilaabato inay ku dhegto, waxay ku imanaysaa dammaanad